Billiards - omunye imidlalo edume kakhulu futhi ethandwa kakhulu emhlabeni. kuzijabulisa imfashini kakhulu, futhi kungatholakala cishe yonke imizi. Iningi lalabo abathatha uhlangothi ube nesikhala esanele endlini futhi imali ku-wallet yakho, ukuhlomisa siqu amabhiliyade ekamelweni lakho.
Amabhiliyade kungokwalabo emidlalweni yasendulo. Isikhathi esiqondile ukubonakala kwakhe bakwazi ukuqinisekisa noma yimuphi mlando. Abanye ososayensi bakholelwa ukuthi ichibi wabonakala ngesikhathi okuvela chess, kuyilapho abanye bethi siwumsebenzi kuba umdlalo amadala. Yini eyaziwayo ukuthi yena wazalwa East, kodwa kulokho lizwe - lokhu namanje akwaziwa ukuthi waphelelaphi, futhi.
Ithebula Billiard yokuqala eyanyatheliswa ngo-1469. Master ukwenziwa ifenisha kuyinto mithi ngokwezifiso. Eye yasinda ngisho igama ifenisha - Anri De Vinem. Nguye owadala etafuleni design, okuyinto cishe alishintshanga kuze kube yilolu suku.
Ngalezo zinsuku lokhu Umdlalo itholakala kuphela abantu esiphakeme futhi umphakathi eliphezulu. Abantu abavamile babengenayo leyo ithuba ukubazi wakhe.
Amabhiliyade ezweni lanamuhla
Njengoba i-bowling kwaduma, ke liye lasakazekela cishe zonke izici zokuphila. Billiards - iwuhlelo lwemidlalo nezwe lesimanje, Championships yonyaka ezithatha inqwaba abadlali, fans kanye abalandeli. Manengi amaqembu Billiard nezinhlangano wahlanganyela ukuqeqesha abadlali professional kanye nayizimfundamakhwela. NgeNkathi Ephakathi itholakala kuphela umphakathi okusezingeni eliphezulu ezweni lanamuhla isibe pool evulekile for cishe wonke umuntu.
Yenza ithebula ngaphansi ukuze leyo nto kungenziwa bathandile kuwo wonke esitolo ifenisha, okuyinto ngokukhethekile isinyathelo esinjalo. Esikhatsini lesifisha, futhi imali nesizotha uyoveza kahle ukuthi zizongena kanye nosayizi, futhi uvumelane isitayela ingaphakathi. Futhi ababazi eziningi nabakhandi Ungenza ithebula Billiard ngezandla zakhe. Ngomzamo omncane futhi zibiza 5-10 izinsuku, ungakha mnandi futhi ekhaya.
Omunye izindaba ezibaluleke kakhulu kudalwa imidlalo ifenisha - it is kahle akhethiwe zokwakha kanye namathuluzi. Ayanda izinga yezingxenye, umkhiqizo osuphelile isezingeni ezinhle futhi ngeke sithathe isikhathi esijana. indwangu Base, izinto asizayo - konke lokhu umelwe emakethe namuhla. Ukuze udale ithebula pool ngezandla zakho, kudingeka alungiselele imidwebo kusengaphambili. Ngenxa yale njongo esibala indawo lapho kuzoba khona ikamelo umdlalo, usayizi raschertit we netafula nazo zonke izakhi ezidingekayo ukwakha kuwo.
A ezihlukahlukene amatafula Billiard
Ezweni engineering kanye nomklamo esikhathini sethu abantu beshintsha futhi elicwengisiswe. Yehlelwa lokhu mkhuba futhi amatafula Billiard, okuyinto manje kutholakale ezenziwe ngengilazi, itshe, ne ukwengeza ezobuchwepheshe zanamuhla nezindlela ze-3D-nemiphumela. Nokho ukubukeka okunesithunzi obusa yesimanjemanje.
Ukwenza into enjalo kuthatha isikhathi eside, futhi le nqubo ibusa eziningi zokwakha zeqophelo eliphezulu. Indwangu, imininingwane isisekelo, Mesh emaphaketheni ukuze - konke nomthelela izinga etafuleni futhi, ngokufanelekile, ukudlala ngaye.
Ukufaka itafula Billiard, kuyatuseka ukuba bameme ongoti anolwazi mkhakha. Le nqubo ithatha cishe 2 izinsuku. Ukubuyekeza Professional yonke imininingwane, komnikelo namaphutha ziyasuswa noma esikhundleni sawo kufakwe izingxenye ezintsha.
Ukuze wenze Billiard etafuleni ngezandla zakho, uzodinga isethi ejwayelekile amathuluzi, okuyinto ekhona workshop noma igalaji cishe noma yimuphi umuntu. Imishini ekhethekile kulesi simo kukhona Jigsaw futhi sokuprakthiza, okuzodingeka ukuthenga uma bengenayo nhlobo.
Ukuze yasibamba nasemhlanganweni kudingeka ngezikulufo, ngezikulufo nemishudo ne ezidingekayo Ubukhulu cross-Sectional nentambo.
Umklamo etafuleni pool
ithebula Standard for amabhiliyade siqukethe luhlaka, izisekelo enkundleni yemidlalo, ubuhlalu nendwangu emaphaketheni. Isidumbu - kuyisisekelo lonke isakhiwo, kugcina enkundleni yemidlalo. Siqukethe izisekelo, okungaba 4, 6 noma 8 izingcezu, kuncike Usayizi itafula Billiard. Rigidity futhi udlulisele amandla kwesakhiwo jumper tsargi. Ngesisekelo enkundleni yemidlalo - ingxenye ebaluleke kakhulu itafula Billiard. Kuyinto unesibopho roll ezinhle amabhola. Ukuze wenze lokhu, ukhethe impahla nge surface bushelelezi, akukho ukukhubazeka. Iphutha ngamunye sizothinta umdlalo. Ezinhlangothini etafuleni afeze umthelela odongeni umsebenzi, ngakho kumele kube isikhathi eside futhi ukunikeza ebuyile ezinhle. Indwangu kufanele kube eqinile futhi eliphezulu efiselekayo kunalokho unamandla isikhathi eside etafuleni ngaphandle constriction. I emaphaketheni akhethiwe ngokuqondile ukwakhiwa kanye nomklamo.
Akuzona zonke izinhlobo zokwelapha amatafula Billiard bayabiza. Ngakho-ke, ongakhetha ezishibhile futhi okuzenzela ngokuvamile sisetshenziswa Cottages, e eziphansi amathilomu namaqembu. Umklamo silula - odongeni eqondile ohlangothini izindonga, ukusekelwa ngesimo isithonjana. Njengoba material for itafula ezinjalo ingasetshenziswa chipboards. Nge amatafula professional awukwazi eziqhathanisa, kodwa umdlalo amateur kuzoletha kumnandi. Ngokwenza Billiard amatafula ngezandla zabo, kodwa ungase wonge imali yakho kahle.
IBhodi - ke kuyingxenye ebalulekile kwetafula, okuyinto engcono yokwenza ukhuni okuqinile ngaphandle amaphutha. La maqembu amane oxhumene kwelinye-ucezu ifreyimu unxande. On the ngaphakathi "emapheshana Ukuduma komsindo" kuyadingeka ukuze babiza amabhola, okuyinto awashintsheki ne injoloba ekhethekile.
I amabhodi bafa ngaphandle imigodi emaphaketheni ukuthi zitholakala emagumbini. Uma etafuleni senziwa emikhulu, khona-ke maphakathi izinhlangothi eside nhlangothi zombili bafa emaphaketheni extra. Ukuze umsebenzi onjalo Jigsaw ewusizo.
Uma emaphaketheni zilungele, ungaqala ukukhweza amabhampa. Le nqubo engenziwa usebenzisa ngezikulufo nge M6 ngentambo. Ngaphezu kwalokho, lapho emapheshana Ukuduma komsindo kuthiwa nasezinsikeni ezinhlangothini, ungaqala sizing kubo zenjoloba. Ubuchwepheshe ngokuvamile eboniswa ku iphakethe. Umbandela eyinhloko ukuthi irabha akufanele kube amagagasi ethe njo.
Lapho wonke la manipulations ziyafezeka, kubalulekile ukunciphisa amabhampa ezindaweni luz. Ngenxa yale njongo senza ipensela indaba emfushane futhi ngokucophelela usike it out izingxenye engadingeki. Okokuqala ngenxa yesizathu esisodwa ephaketheni, futhi emva kokuhlola ngokunemba ibulawa ngesihluku futhi abanye.
Lapho ithebula pool elenziwe ngezandla zabo, umniningwane esinjalo kalula kakhulu kwenziwe ngesimo amatafula elingunxande, okuzokwenziwa nendawo ukubamba 80% ububanzi etafuleni. Ngenxa yalesi ingxenye amabhodi DSP lehlukene tibalulekile kakhulu. Ezansi le amakhabethe ezifakiwe yokululama ngezikulufo, okuyinto usizo setha ezingeni lelifanele ebandleni.
Okwenza amakhabethe ezinjalo kudingeka for izindonga asekelayo, engenhla futhi ezindaweni eziphansi. Izindonga kuthiwa esigaxe kanye ngezikulufo namakhona. A ngezansi futhi phezulu ingxenye ogibele yokubeka, okuyinto pre-enamathiselwe ezindongeni ukwesekwa. Eceleni nezikulufi phansi kuthiwa screwed imilenze, okuyinto usizo setha ezingeni ne etafuleni ukulungiswa.
Ukwenza umzimba kanye imikhawulo
Lezi zingxenye ezifaneleke kahle ngakho chipboard laminated. Kuyadingeka ukuba bayamba izimbobo ezindongeni ezindaweni kuphi ukukhwezwa esikebheni. ubukhulu emgodini ebandleni kumelwe abe 9 mm, kodwa kuphela "ipulani" ezincane, futhi kamuva yamba usayizi edingekayo kungenziwa womshini izindlu. Ukufaka phansi, ogibele yokubeka odongeni, usayizi okufanele 20 x 20 mm, futhi izinhlangothi ezine zokuhlala ezindaweni sixhumene. Futhi kule fomu lifakwe phansi pre-cut.
Ngemva benhlangano, phansi kwetafula kudingeka ukukhiqiza futhi ufake jumper. Ngenxa yalesi chipboard kufanelekile nge ukushuba 16 mm. Slats kwaleli bhuloho kuthiwa screwed ngezikulufo.
umzimba ohlanganisiwe kufanele kube namandla futhi iqine njengoba kubalulekile ukumelana ngaphandle ukusonteka ensimini futhi lo mdlalo.
indwangu ekhethekile, okuyinto ungakwazi sithathe ku nenqubo oludingekayo edingekayo ukuze zimboze etafuleni. Kuye ububanzi zewebhu constriction izohamba kusuka 2.2 kumamitha angu-3 impahla. Lapho uthenga kufanele inake yokuthi indwangu kufanele amboze hhayi kuphela etafuleni, kodwa futhi ebhodini. Padding of pool etafuleni ngezandla - ke kudla isikhathi, futhi kubalulekile ukuchitha kancane. Ukuqala indwangu zangaphambi tensioned enkundleni yemidlalo futhi avunyelwe ukuba bame amahora amaningana. Phakathi nalesi sikhathi, le ndwangu edlelana ne-ukushisa kanye umswakama kusuka phezulu kanye sikhubazekile kancane. Ngemva kwalokho ungakwazi ukudonsa ngokuphelele.
Futhi ngenxa yokudlala endaweni isidingo: iraba akhethekile izibuko noma obhasikidi amabhola. Bhekani ningethuki, ngokuba mhlawumbe ukuthola izinga ezinhle, njengoba yenziwe ngobudlabha ngeke lihlale isikhathi eside, futhi kukhona isidingo kule ukulungisa ekuqaleni. Uma izimali ungavumeli, ungathenga amathayi b / y, okuyilona elisebenzayo futhi ezifanele ukusetshenziswa ekhaya, lapho yokukhiqiza itafula Billiard ngezandla zakhe.
Beakers (noma kubhasikidi) Kungenzeka futhi ukuba sithathe ngesabelomali nangokuhambisana isakhiwo etafuleni.
Lapho zonke izingxenye eziyinhloko zenziwa, ukukhiqizwa itafula Billiard ngezandla zakhe cishe kufike ekupheleni, futhi usukulungele ukuba bahlangane. Isinyathelo sokuqala siwukuba ukusungula umzimba phezu kwetafula bese ngokuqinile isekela zonke aboshelwe nezikulufi. Ngaphezu kwalokho, izindlu efakwe kwi okulungiselelwe kanye wahlabeka Ubukhulu wayefisa ipuleti enkundleni yemidlalo. Futhi kuphela ke ukukhwezwa ebhodini. Kuyadingeka ukuba uhlole ukuthi zazingekho Ukuhlanekezelwa nokushintshashintsha.
Uma itafula pool ngoba indlu ngezandla zakhe wenza okokuqala, engxenyeni engenhla izindleko ukuqoqa kuphela ngemva isheke kwesikhashana futhi ifanelane nayo yonke ISIZINDA. Ungase futhi umeme ochwepheshe ukuqinisekisa ukuthi etafuleni okuye kwaqoqwa yonke imithetho futhi ikhumbula zonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama, aziwa ochwepheshe.
Ngemva kokufunda lo mbhalo, ungakwazi kalula ukuthola indlela yokwenza itafula Billiard ngezandla zakhe ekhaya. Kulokhu, sebenzisa izinto engabizi futhi imishini.
Ukunakekela etafuleni pool
Sanquma ukwenza itafula Billiard ngezandla zakhe? Ubukhulu kufanele abale kusengaphambili. Ngisho etafuleni kulencane ejwayelekile ithatha isikhala esikhulu. Ngaphezu kwalokho, kufanele ahlale endaweni ezungeze lona umdlalo.
Ukuze noma iyiphi ifenisha kufanele banakekele - ke isikhathi eside ekuphileni futhi kuthuthukisa ukubukeka kwayo. ithebula Pool kwaba okufanayo. Ngoba ubude bokuphila inkonzo yayo kubalulekile ukuqapha lokushisa kanye nomswakama egumbini lapho likhona. Lapho izinga lokushisa lehla, umswakama eliphezulu kakhulu noma eliphansi, umkhiqizo kungenzeka zikhubazekile, okuholela isidingo ukulungisa ithebula pool ngezandla zakho noma ngosizo ochwepheshe.
izimiso zokuhle Billiard
amabhiliyade Professional kuyinto nje ikhono ukudlala ezingeni eliphezulu, kodwa futhi ulwazi yokuziphatha efanele. Lokhu kuyingxenye ozikhethela yomdlalo, kodwa ukwazi izimiso ezimbalwa ezilula uyosibonisa inhlonipho ochwepheshe.
Enye yezinto sokuqala nesibaluleke kakhulu ukuhlonipha hhayi kuphela abadlali, kodwa futhi imishini. Baize, uyakubona lokhu amabhola kanye itafula ichibi ngokwalo - izinto ezibizayo, kanye nenhlonipho kuhle kubo ngeke kungaqashelwa. Isibonelo, ngokulondoloza bezihlikihla wokulinganisa icebiso okufanele Ungeqisi it, ngoba izibazi emva umthelela angahlala phezu ngendwangu, kanye wokulinganisa kuyadingeka ukuze abeke etafuleni noma ephaketheni ekhethekile, uma inqobo nje isudu.
Niphuza, adle noma intuthu eduze kwetafula Billiard ochwepheshe futhi ukuziphatha okubi. Ngakho-ke, uma unesifiso nidla, noma niphuza, kungcono ukulinda ekupheleni umdlalo bese ushiye isikhashana.
Futhi, inkulumo, ingxoxo phakathi umdlalo akwamukeleki. Konke lokhu kungenziwa ngu ekupheleni kwesigamu. imishwana engadingekile ukuphazamisa abadlali futhi kungaphazamisa kokwenza hit ezinhle.
Enye yezindlela ezibaluleke kakhulu-ke mthetho mayelana icebiso Billiard. Kuthathwa ifomu embi ukuthatha uyakubona lokhu yomunye, noma ngisho uwucele. Uma umdlali efuna yena, khona-ke kufanele anikele ukudlala amabhiliyade amathuluzi.
Kubalulekile ukuba siqaphele endleleni. Umnikazi engenza itafula Billiard ngezandla zakhe, futhi ngakho-ke ikhathazeka kakhulu ukwelapha kwakhe. Kuthathwa luhlaza ukugxeka imishini emikhulu abaphikisi nokudlala yakhe amasu.
Manufactured amatafula Billiard ngezandla - kuyathakazelisa kakhulu, othanda abaculi abaningi nezingcweti zemisebenzi yezandla. Nsuku zonke, isithakazelo umdlalo luyanda, kukhona abadlali abasha futhi abalandeli amabhiliyade.
Zikanokusho yasekuqaleni igolide izintokazi ukubukela: kanjani ukukhetha
Ukuthuthukiswa komlando kafushane umqondo. izigaba zomlando ka ekukhuleni komphakathi
Inkukhu ebilisiwe. Ungadliwa inkukhu
Indlela ukulanda ifayela sesifufula LED enjalo, futhi emikhosini, nasekwethwaseni ziyini na?